That's so good, right?: June 2010
တစ်ခုသော ညနေစောင်း နောက်ဘေးဝရံတာမှာ ကုလားထိုင်လေးချ ice tea ဖန်ခွက်လေးဖြင့် ထိုင်ရင်းငေးနေဖြစ်ပါတယ်။
'ဟေး...အစ်ကို ဘာတွေလုပ်နေလဲ?' ဆိုတဲ့ အသံနှင့်အတူ ရန်နိုင်တို့ တိုက်ခန်းဘက်က တံခါးဖွင့်သံကြားရပြီး သူလှမ်းထွက်လာတယ်။
'ဘာမှ ထူးထူးထွေထွေမလုပ်ပါဘူးကွာ...အစ်ကိုက နေ၀င်ဆည်းဆာကို ထိုင်ကြည့်ရတာကို သဘောကျတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဒီမှာ ထိုင်ရင်း နေလုံးကြီးတဖြည်းဖြည်း အောက်စိုက်ကျသွားတာကိုကြည့်နေရုံပါ'
'မင်းကော ဘာဖြစ်? ဒီနေ့ညတော့ ဆွိတီ အော်တဲ့အသံ မင်းကိုဟစ်တဲ့အသံမကြားရပါလား?'
ရန်နိုင် သဘောတကျပြုံးရင်း 'ဒီည အစ်ကိုမကြားရမှာသေချာသလောက်ရှိတယ်ဗျ။ ဆွိတီ အထုပ်အပိုးတွေပြင်ဆင်နေလေရဲ့ ထင်းရှူး မြိုင်ကိုပြန်ဖို့။ သူ့အမေဆီ အလည်အပတ်ခရီးဆိုပါတော့' တဲ့ပြောပါတယ်။
'ဒါဆို မင်းမောင်းသွားမှာပေါ့ ကားက?
'Yep, ဒါပေမဲ့ ညီအကူအညီ နည်းနည်းလောက်တောင်းချင်တယ် အစ်ကို့ကို။ ညီမရှိတုန်း အိမ်ဘက်ကို တစ်ချက်လောက် စောင့်ကြည့် ပေးထားနိုင်မလားလို့။ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဟင်?'
'အစ်ကိုက မိတ်ဆွေကောင်း ပီသလိုက်တာ' သူအဲဒီ့စကားကိုပြောရင်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူရှိမရှိ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကာ ကျွန်တော့် ကိုနမ်းပါတော့တယ်။
'No, မလိုပါဘူး ညီရယ်'
ကျွန်တော့်အထင် နောက်နေ့မနက် လေးနာရီလောက်မှာ ကားနောက်ဖုံးဆောင့်ပိတ်သံတစ်သံနှင့် အတူ ကားမောင်းထွက်သွားသံတွေကို ကြားလိုက်ရတယ်။ ပြတင်းပေါက်ကနေ အဆောတလျင်ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့ကားပါကင်ကနေ မောင်းထွက်သွားတဲ့ကားနောက်မြီးကို မြင်လိုက်ရပါရဲ့။ ကျွန်တော် ဗိုက်ထဲ ဘာမှမရှိတော့သလို ခံစားရပါတယ်။ အရာအားလုံးရုတ်တရက်ပြောင်းလဲကုန်သလိုပါပဲ။ အခြေအနေ က ကောင်းမလား ဒါမှမဟုတ် ဆိုးမှာလား မသေချာပါဘူး။
အလုပ်က အပြန် ညလယ်ရောက်တော့ ရေမိုးချိုး၊ ဘီယာနည်းနည်းသောက်ကာ အိပ်ဖို့သင့်ပြီဆိုပြီး အိပ်ယာပေါ် လှဲလျောင်းမိပါတယ် ပျင်းရိပျင်းတွဲ။ အိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲလျောင်းနေတာ မိနစ်၂၀လောက်ကြာသည်အထိ အချိန်တိုင်းလိုလို ရန်နိုင့်အကြောင်းကိုတွေးမိနေပါ တယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ချိန်များကိုပေါ့။ ကျွန်တော့် စိတ်တွေဟာ စက်ဝိုင်းတစ်ခုလို လည်ပတ်နေတာ သူ့ရဲ့ တပ် မက်ဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်၊ တောက်ပတဲ့ မျက်ဝန်းအစုံ၊ ညိုမှောင်နေတဲ့ ဆံနွယ်ခွေတွေ၊ အမွှေးနုလေးတွေနှင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ရင်အုပ်ကြွက် သားများ၊ ပန်းပုဆရာတစ်ယောက် ထုဆစ်ထားသလို ပေါ်လွင်လှပတဲ့ တွေ၊ ပေါင်တံကြီးတွေကလည်း ထုထည်ကြီးလှသလို ကွဲပြားနေတဲ့ ကြွက်သားအမြှောင်းတွေ။ Damm...ရန်နိုင်ဟာ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ နမူနာ ပုံရိပ်စစ်တစ်ခုပါပဲ။
ရန်နိုင့်အကြောင်းတွေတွေးရင်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာကော ကိုယ်ခန္ဓာကပါ လိင်စိတ်ဆန္ဒတွေ နိုးထလာတာကို တွေ့ရပါရဲ့။ လက်အစုံဟာ ပေါင်ကြားဆီလျောကျသွားရင်း brief ထဲက တုတ်ခိုင်ပြီး မာထောင်နေတဲ့ -ီးကို ပွတ်သပ်မိသလို နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ဗိုက်သားလေးတွေ ကိုလည်း အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ပွတ်သပ်နေမိတာ အချိန်နည်းနည်းကြာပါတယ်။ ဂုတ်သားလေးတွေ ပါးပြင်လေးတွေကို ပွတ်သပ်ကြည့်မိ တော့ ရန်နိုင့် အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တဲ့ လေပူနွေးနွေးကို ပြန်ခံစားမိရသလို ဖြစ်မိပေါ့။ ဟိုသည်လူးလိမ့်ရင်း တဖက်ခေါင်းအုံးပေါ် မျက်နှာအပ်မိတော့ သူ့ကိုယ်နံ့ကိုရတယ်။ သူ့ကိုယ်နံ့ဟာ အော်ဒီကလုံးရေမွှေးလိုပါပဲ။ မွှေးရနံ့က ကျွန်တော့်ကို လိင်စိတ်ဆန္ဒအမြင့် ဆုံးဆီခေါ်ဆောင်သွားကာ ရူးသွပ်စေပါရဲ့။ နောက်မှ သတိရတယ် အိပ်ယာခင်းအသုံးအဆောင်တွေကို မလဲလှယ်ရသေးတာ ရန်နိုင်နဲ့ နောက်ဆုံးအတူအိပ်ပြီးချိန်ကတည်းကဆိုတာ။ ကျွန်တော့်ညာလက် တွေဟာ အတွင်းခံဘောင်းဘီဆီ လျှောကျသွားပြန်ကာ အပြင်း အထန်လှုပ်ရှားကစား -ွင်းထုမိပါရော အရူးတစ်ယောက်လို။ နောက်လေး ငါးမိနစ်လောက်နေတော့ ရန်နိုင်...ရန်နိုင် လို့တိုး တိုးခေါ် ညည်းမိရင်း ဘောင်းဘီထဲ လက်ဖ၀ါးတွေထဲ အရွှဲပန်းထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ လှဲ အိပ်နေရာကနေ ထထိုင်လိုက်ကာ ဘောင်းဘီကိုဆွဲ ချွတ်ပြီးတော့ကာ လက်မှာပေနေတဲ့ cum တွေကို ရန်နိုင့်ဟာတွေအဖြစ်မှတ်ယူရင်း လျက် လိုက်မိပါပြီ။ ကျွန်တော် သူ့ကိုတကယ် တမ်းတတယ် လွမ်းတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးကို ကျွန်တော်ချစ်မိသွားပြီလား? ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လေ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့အချစ်ကို ခံယူဖို့လိုခဲ့ရင် ကျွန်တော်ဟာ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပေမဲ့ 'ဆွိတီ'ကတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။
တစ်ရက် သို့မဟုတ် တစ်နာရီသာ ရန်နိုင့်အကြောင်းတွေးမိတာမဟုတ်ခဲ့ပါ။ ရက်တွေမှသည် ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်သို့တိုင်ခဲ့ပြီ။ ကျွန်တော် ရန်နိုင်တို့တိုက်ခန်းဘက်ကို မကြာခဏလျှောက်လှမ်းမိပါရဲ့။ သူသွားတော့ ကျွန်တော့်ကို သော့တစ်စုံပေးခဲ့တာကြောင့် သူ့ အငွေ့အသက်တွေရှိရာကို ၀င်သွားကြည့်ဖြစ်တာ။ သူတို့ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွားကာ ရန်နိုင့် deodorant ပြီးတော့ shaving cream တွေ ကို ရှူရှိုက်မိပြန်တာလေ။ Damm....ရေချိုးခန်း အမှိုက်ပုံးထဲမှာ သုံးပြီးသား condom တစ်ခု။ ဒါကျွန်တော်နှင့် ဆက်ဆံခဲ့တုန်းကဟာဆို တာ မှတ်မိ လိုက်ရ တယ်။ ဒီကိစ္စသာ ဆွိတီ သိလို့ကတော့ ရန်နိုင့်ကို သတ်မှာ။
ရန်နိုင်မရှိတဲ့ နေ့တွေ သုံးပတ်လောက်အကြာမှာတော့ ကျွန်တော့် မျှော်လင့်ချက်လေးတွေ ကျဆင်းလာရပါပြီ။ စိတ်ထဲမှာ ဆွိတီက ဒီ နေရာမှာ ပြန်မနေချင်တော့လို့သာ ရန်နိုင်ပြန်မလာတာလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖြေသိမ့်နေရတာ ခဏသာ။ တီဗီရှေ့ ဆိုဖာပေါ်လှဲလျောင်း ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရှုံးသမားတစ်ယောက်အဖြစ် မြင်ယောင်မိရသလိုပဲ။ ဘာကြောင့်ဆို တားပိုင်ခွင့်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိခဲ့ဘူးလေ ကိုယ်ချစ် နေရသူကို။
ကျွန်တော် သတိရတာမမှားဘူးဆိုရင်တော့ ရန်နိုင်ထွက်ခွာသွားတာလေးပတ်မြောက် မနက်ခင်းတစ်နာရီ။ ကားတစ်စင်းရဲ့ တံခါးဆောင့် ပိတ်သံကြောင့် ရုတ်တရက်နိုးသွားရပါတယ်။ အဲဒီ့အသံက ကျွန်တော့်အိပ်ခန်းပြတင်းပေါက်ကနေ မြင်ရတဲ့ အောက်ထပ် ကားပါကင်က ဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော် အိပ်ချင်မူးတူးနှင့် ပျင်းရိပျင်းတွဲထရပ်လိုက်ကာ မီးဖွင့်လိုက်ရတယ် တစ်စုံတစ်ယောက်က အခန်းတံခါးကို ခေါက်နေ တာကြောင့်လေ။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး brief ဘောင်းဘီတိုလေးက လွဲလို့ဘာမှမ၀တ်ထားပေမဲ့ တံခါးကိုဖွင့်လိုက်တာ ဖွင့်ဖွင့်လိုက် ခြင်းမှာ ဘဲ ဆွဲယူပွေ့ဖက် ညစ်ပြုရင်း ခပ်ပြင်းပြင်းအနမ်းတွေကို ခံယူလိုက်ရပါတယ်။ အပြည့်အ၀မနိုးသေးတဲ့ ကျွန်တော် အခုမှ မျက်လုံး တွေပြူး ပြီး 'ဘာ..ဘာဖြစ်တာလဲ?' ဖြစ်ရပေါ့။ ရန်နိုင်...ရန်နိုင်ပါပဲ။ သူကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကို တည့်တည့်ဆိုက်ကြည့်ပြီး 'အစ်ကို...... ညီ. .အရမ်း လွမ်းနေခဲ့တာဗျ။ အစ်ကိုရှိတဲ့ ဒီနေရာကို ပြန်လာရဖို့ အချိန်တွေကို ခက်ခက်ခဲခဲစောင့်နေခဲ့ရတာ'
ကျွန်တော်.....ကျွန်တော် သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်လည်နမ်းရှိုက်မိပါတယ်။ ကာလကြာရှည်မတွေ့ရတဲ့ ဆွေမျိုး သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခု ကိုပြန်လည် ပိုင်ဆိုင်ရသလိုပါ။ ရန်နိုင့်ကို တွေ့မြင်ရတာ သူ့အသံကိုကြားရတာ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖက်တွယ်ထားရတာ.....အ ကောင်းဆုံး။
'အဲဒါဘယ်အချိန်က ဘယ်လိုခံစားမိခဲ့သလဲ ညီမသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ညီ..အစ်ကို့ကိုချစ်တယ် လိုအပ်နေတယ် အရမ်းပါပဲဗျာ'
ရန်နိုင်.....သူ့အ၀တ်တွေက စချွတ်တယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား အိပ်ခန်းထဲက ခုတင်ရှိရာဆီကို အလောတကြီး ရွေ့ ကြတာ။ ကျွန်တော် ရန်နိုင့်ကို ရူးသွပ်စွာပြင်းပြင်းပျပျ နမ်းရှုံ့မိပါတယ်။ သူ့ကိုပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာလွန်းလို့လေ။ သူ့ကိုယ်ပေါ်က အ ၀တ်တွေဖယ်ရှားဖို့ အစအနတောင် မတွေ့ရအောင်ကူပြီး ဖယ်ရှားပေးမိပါရဲ့။ ကျွန်တော် သူ့ကို အနမ်းမိုးစွေနေခဲ့သလို သူ့လက်အစုံက လည်း ကျွန်တော့်အတွင်းခံ brief ထဲလက်လျှိုကာ မာထောင်နေတဲ့ ငပဲကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ပါတော့တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခု ပူးကပ် လျှောက်လှမ်းရင်း အိပ်ခန်းထဲအရောက် သူ ကျွန်တော့်ကို တွန်းလှဲလိုက်ကာ ပက်လက်အိပ်စေပါပြီ သူ့သဘောအတိုင်းပေါ့။
ရုတ်တရက် ခုတင်ပေါ် ပက်လက်ဖြစ်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ် ရန်နိုင်ခွတက်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ် ပါတယ်။ ဘောင်းဘီဆွဲအချွတ်မှာတော့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ မတ်ကနဲ ဘတ်ကနဲ ထိုးထိုးထောင်ထောင်။ အဲဒါကို ရန်နိုင် တောက်ပတဲ့မျက်ဝန်းတွေ ဖြင့် စိုက်ကြည့်ရင်း 'God, ဒါကြီးကို ထင်ရှူးမြိုင်မပြန်ခင်ကတည်းက ကိုင်ကြည့်ချင်နေမိတာ' တဲ့။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ရီလှိုက်မောနေ ဟန်ဖြင့် စူးစိုက်ကြည့်နေတာများ အားရပါးရ။
'အစ်ကိုကတော့ မင်းထွက်သွားတဲ့နေ့ကစပြီး ဘာမှမတွေးမိဖူးဘူး လွမ်းတာပဲသိတယ်'
ရန်နိုင် ကျွန်တော့် -ီးကို အသေအချာကိုင်ပြီး မျက်နှာအပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ညည်းတွားသံအကျယ်ကြီးအော်မိဖို့ ကျွန်တော့်အ လှည့်ပါ။ သူ့လျှာဖျားလေးက ဆွိတီ အစိကို တို့ထိသလိုမျိုး ကျွန်တော့်ကွမ်းသီးခေါင်းကို ထိခတ်တယ်။ နို့သီးခေါင်းကို ခပ်ဖြည်းဖြည်း လေးစုပ်သလို ကျွန်တော့် -ိင်တံတစ်ချောင်းလုံးကို ခပ်မျှင်းမျှင်းလေးစုပ်တာ အိုး....အသံတွေ ထိန်းမထားနိုင်အောင် ညည်းတွားမိရပါ တယ်။
ရန်နိုင်ဘာများ မှတ်နေသလည်းမသိဘူး ကျွန်တော့်ငပဲကို အားရပါးရကိုင်တွယ်ကာ အဆုံးထိငုံလိုက် ထိပ်ပိုင်းလေးကိုပဲ အသွင်းအ ထုတ်လုပ်လိုက်နဲ့ စုပ်မျိုနေတာ အတော်ကြာတာ။ လျှာနဲ့ရစ်ပတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားမွှေနေတာကိုက ပူပူနွေးနွေးဖြင့် ရင်အခုန်ကြီး ခုန်မိရတယ်။ ပါးစပ်ထဲကနေ အပြင်ကိုပြန်ထုတ်ရင်း အာခံတွင်းထဲ လျောကနဲ စုပ်ယူလိုက်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် မထိန်းနိုင်တော့ပါပြီ။
'ရန်နိုင်.....မထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ ငုံမထားနဲ့တော့ အပြင်ကို ပြန်ထုတ်....Oh Fuck!'
ပြန်မထုတ်ဘဲ တပြွတ်ပြွတ်စုပ်နေတာ ထောင်မတ်မိတဲ့ ကျွန်တော့် ဦးခေါင်း ခေါင်းအုံးပေါ်ပြန်လဲကျရင်း ပူနွေး ချွဲပျစ် ဖြူဖွေးသော အရည် များ သူ့လည်မျိုထဲ ဒါရိုက်ပန်းထည့်ပစ်ရပေါ့။
ဖြစ်ပေါ်ခံစားမိရသမျှ Climax ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ရန်နိုင် အဲဒါကို မလွှတ်သေးဘဲ ပြွတ်ပြွတ်မည်အောင် ဆက်စုပ်နေတာ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ဒိုးဒိုးဒန့်ဒန့် ဖြစ်သွားရကာ ရင်ထဲဟာဆင်းသွားရပါပြီ။
ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကို ပြုံး၍စိုက်ကြည့်ရင်း 'အစ်ကို ဂန်ဒူး' တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို သဘောတကျ ပြန်ပြုံးမိရရင်း 'you cocksucker' လို့ပြောရင်း နှစ်ဦးသား ရယ်မောမိပါရောလေ။ ကျွန်တော့် နံဘေးမှာ သူလှဲလိုက်တော့ သူ့မျက်နှာပေါ် မိုးကြည့်ရင်း ကျွန်တော် စကားတွေတစ်ဝပြောဖြစ်ပါရဲ့။
'အစ်ကို က မင်းကို မတွေ့ရတော့ဘူးထင်နေခဲ့တာ'
'ညီ....အစ်ကို့ကို ချစ်မိသွားပြီ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖီလင်လိုအပ်ချက်ကို အပြည့်အ၀ပေးစွမ်းနိုင်တာ အစ်ကိုတစ်ယောက်ဘဲ။ ညီ ဆိုလိုတာက လိင်ဆက်ဆံတဲ့ကျေနပ်မှုကိုပြောတာပါ။ ညီ့ဘ၀အတွက် အစ်ကို့ကိုလိုတယ်ဗျာ'
ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်ရင်း စကားဆက်မပြောဘဲ အတန်ကြာငြိမ်သက်နေပြီးမှ ဆက်ပြောပါတယ် သူ့အကြောင်း။
'ဆွိတီနှင့် ညီလမ်းခွဲလိုက်ပြီအစ်ကို။ မကြာခင် တရားဝင်ကွာရှင်းတော့မှာ။ တစ်ချိန်လုံး ညီ့ကို ဘာကြောင့် ပြဿနာရှာနေတယ်ဆိုတာ သိ ရပြီလေအခု'
'ဘာကြောင့်လဲ? အစ်ကိုထင်တာက မိန်းမဆိုတော့ ကိုယ့်ယောက်ျားအပေါ် အနိုင်နည်းနည်းယူချင်စိတ်ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်အဖြစ်ပဲ တွေးမိတာ'
'မဟုတ်ဘူး အစ်ကို သူ့ငယ်ရည်းစားနဲ့ ထင်းရှူးမြိုင်မှာ ပြန်ချိတ်မိနေခဲ့တာ။ အဲဒီ့လူကို ညီံထက် ပိုချစ်တယ်လေ။ ဒီကိစ္စက သူ့အမေ ကိုသွားတွေ့တာထက် အရေးပိုကြီးနေတာ'
'Fuck, no shit. ဒါဆို ဆွိတီက သူ့အကောင်နဲ့ မင်းကွယ်ရာမှာ ဇာတ်လမ်းစနေတာပေါ့ ဟုတ်လား?'
'ဟုတ်တယ်၊ တချို့အချိန်တွေမှာ ညီခံစားပေးနေရတာနဲ့တောင်မတန်ဘူး။ အစပိုင်း ညီတို့အဆင်မပြေဖြစ်စက ဒါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လို့ပဲလို့ ထင်နေခဲ့တာ။ အခုတော့ ဘာမှမခံစားတော့ပါဘူး။ ဘယ်လိုအကောင်းတွေလာမလည်း အဆိုးတွေသွား မလည်း စတာတွေအပေါ်'
'ရန်နိုင်....ညီရယ်...ကိုယ်ကတော့နော် မင်းကိုပဲ တမ်းတနေခဲ့တာ။ ပြီးတော့ မင်းနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်မင်းအတွက် သီးသန့် ဆိုတာမျိုးပဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ'
သူ့သွားတက်လေးတွေပေါ်လာတဲ့အထိပြုံးတယ် အားရပါးရ။ ဘာအရောင်မှမပါတဲ့ ပြုံးခြင်းမျိုးပေါ့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းဖက် လိုက်ရင်းအနမ်းမိုးပေါက်လေးတွေ စကြဲပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်လက်တွေကတော့ ရန်နိုင့် ပခုံးသား၊ ကျောပြင်၊ တင်ပါးကျစ်ကျစ်တွေ ဆီ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်မိရရင်း ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုပူးကပ်နေတဲ့ကြားမှာ ခိုးလုခုလုဖြစ်နေတဲ့ သူ့ငပဲထွားထွားကြီးကို အမိအရဆုပ်ကိုင်ဖြစ်ရ ပေါ့။ ထိပ်အရေပြားလေးကို လက်ညှိုးလက်မကြားမှာ အသာညှပ်ရင်း ရှေ့တိုးနှောက်ငှင်အသာလုပ်ပေးတော့ သူ့ငပဲဟာ မာသထက်မာ ကာ ဖောင်းကြွလာပါတော့တယ်။
'ညီ...အစ်ကို့ကိုလည်း.....' ကျွန်တော် စကားမဆက်တော့ဘဲ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ရင်ဘတ်ထိဆွဲ ခြေချင်းဝတ်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း အနေ အထားအသင့်ပြုလုပ်ပြလိုက်တော့တယ်။
ရန်နိုင် ကျွန်တော့်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သူ့ပခုံးပေါ်ပြောင်းတင်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေကို အချစ်နှင့်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုရော နေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်သေးတာလေ ဟိုးစိတ်အတွင်းထဲအထိ ထိုးဖောက်သွားတဲ့အတိုင်း။ ပြီးမှ သူ့ရဲ့ ငပဲထိပ်ပိုင်းဟာ တဖြည်း ဖြည်း ကျွန်တော့်ခရေတွင်းထဲ ထိုးဝင်လာတယ်။ တရှိန်တိုးမဟုတ် တစ်လက်မခြင်း တစ်စင်တီမီတာခြင်း ၀င်လာသလိုခံစားရပါတယ်။ အ ရာအားလုံး slow motion ခံစားချက်အားလုံး ဖြစ်ပျက်နေသလိုပါပဲ။
'ကို...ဒီလို အတူနေရတဲ့ ဖီလင်ကို ညီပိုပြီးလွမ်းနေခဲ့တာ။ တခြားလူနဲ့ ထပ်ပြီးအရသာခံဖို့ မစဉ်းစားမိခဲ့ဖူးဘူးသိလား?'
ရင်ထဲ တသိမ့်သိမ့်ခံစားရတဲ့အပြောလေးပါပဲ။ ရန်နိုင့်လည်ပင်းကို ဆွဲဖက်ငုံ့ကိုင်းစေရင်း သူနမ်းခဲ့ဖူးသလိုမျိုး တပ်မက်စွာ နမ်းရှိုက်နေမိ ပေါ့။ တင်ပါးနှစ်ခုကြားထိုးထိုးဝင်လာတဲ့ သူ့ငပဲကပေးတဲ့ ဖီလင်ဟာ ကျွန်တော့်အသဲနှလုံးထဲအထိဝင်ရောက်လာသလိုပါပဲ။ သေဆုံးပြီး ကောင်းကင်ဘုံတံခါးဝဆီသွားနေခဲ့ရပါပြီ။ ကွမ်းသီးခေါင်းထိ ဆွဲထုတ်ပြီး ပင့်ကာ ပင့်ကာ ဆောင့်လိုက်တဲ့ ဆောင့်ချက်များဟာ ကျွန်တော့် G-spot ကိုထိမှထိ။ ရန်နိုင့်တစ်ခုလုံးထည့်ထားလိုက်ချင်တော့တာပဲ။
ရန်နိုင်နှင့် ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးပေါင်းစည်းနေမှုဟာ ချစ်သူနှစ်ဦး မင်္ဂလာဦးညမှာ အစွမ်းကုန်ချစ်ပွဲဝင်နေကြသလို ခံစားရပါတယ်။ တစ် ယောက်နှင့် တစ်ယောက် လိုအပ်ချက်ကို အစွမ်းကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးကြတာ ရင်ထဲအသည်းထဲက။ အရင်က တစ်ခြားလူများနှင့် ပတ် သက်ခဲ့သလို လိင်စိတ်ဆန္ဒသက်သက်သာမဟုတ် ချစ်ခင်နှစ်လိုမှုများ ပေါင်းစပ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်မည်ထင်ပါ့။ ဒီည ရန်နိုင်ရဲ့တို့ထိမှု တွေဟာ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲက တစ်စုံတစ်ရာသော မျှော်လင့်မှုကို အတည်ပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ရာဆိုတာက ကျွန်တော် တို့ဘ၀တွေ အတူတကွဖြစ်တည်ကြဖို့ ကိစ္စရပ်ပါ။
မိနစ် ၂၀လောက်အကြာမှာတော့ ရန်နိုင့်အထုတ်အသွင်းစံချိန်ဟာ မြင့်သထက်မြင့်လာသလို သူ့အသက်ရှူသံများဟာလည်း ပြောင်းလဲစ ပြုလာပါပြီ။ တစ်ချက် တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း သူ့ခါးအစုံကို လက်နှင့်ထိန်းပေးရင်း ခရေကြွက်သားများကို ညှစ်ညှစ်ပေးလိုက်တယ်။ ခါးကိုယိမ်းနွဲ့ရင်း သူမွှေတော့ကျွန်တော်လေ သူ့ခါးမုန်တိုင်းမှာမျောရော။
လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ပါတနာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မိရင် ကိုယ့်ဖီလင်အပြောင်းအလဲဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ ရန်နိုင့်အတွက် ဒက်ထိမှန်ပါတယ်။ သူ့ဆောင့်ချက်တွေမြှင့်ရင်း ကျွန်တော့်အသက်ရှူသံ မျက်နှာအမူအရာ ညည်းသံသဲ့သဲ့တို့ကြောင့် သူ....သူ။
'Oh Fuck, Oh Fuck man....I'm gonna, I'mmmmmmmmmmmmm'
ရွှေရည်တွေအပြည့်ပန်းထည့်လိုက်တာကို ခံစားရမိတာများ ပူနွေးနေတဲ့ရေ တစ်ဂါလံလောက်ကို ပုဂံလုံးထဲလောင်းထည့်လိုက်သလို နွေး ကနဲ။ ကျွန်တော့်ခြေထောက်အစုံနှင့် သူ့တင်ပါးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ချုပ်ထားလိုက်ရင်း သူ့တစ်ကိုယ်လုံးနှင့် ငပဲတစ်ချောင်းလုံးမြှုပ်သ ထက်မြှုပ်စေပြီး အတွင်းပိုင်းထိ ရွှေရည်တွေထည့်ပေးစေတာ အဟုတ်။ သူလည်း အစွမ်းကုန်ကော့ရင်း ကျွန်တော်လည်တိုင်တွေပါးပြင် တွေကို နမ်းပါသေးရဲ့။
ရင်ခွင်ထဲ သူမှီတွယ်လိုက်ရင်း အငမ်းမရ အသက်ရှူကာ အမောဖြေပါတယ် ခဏတော့။ ကျွန်တော် သူ့ဆံနွယ်လေးတွေကို လက်နှင့် အသာထိုးဖွရင်း အချစ်တွေပြည့်လျှမ်းနေတဲ့ လေသံဖြင့် 'ရန်နိုင် မင်းအပြုအမူဆက်ဆံပုံလေးတွေက အစ်ကို့ကို ချစ်မိသွားစေသလိုပဲ မင်းကို' ပြောမိပါတယ်။
'အစ်ကိုဆိုလိုတာက အစ်ကို့ကို ကျွန်တော့်ချစ်သူအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာလား?'
'မင်းက မချစ်ဘူးဆိုရင်တောင် ကိုယ်က စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ရဦးမှာလေ'
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်သား 'ဆွိတီ'နှင့် ကလေးတွေရဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယအားလုံးကိုထုပ်ပိုးပြီး သကာလ 'ထင်းရှူးမြိုင်'ကို သွားမည့် အ ဝေးပြေးကားဖြင့် တန်ဆာဆောင်ကာပို့လိုက်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ ကလေးတွေအတွက်အဆင်ပြေဖို့အလိုငှာ သူတို့အမေနှင့် ထည့်ပေးလိုက်ရတာ ရန်နိုင် မျက်ရည်တွေတော့ ဝေ့ရတာပေါ့။ ကျွန်တော် ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ အရာအားလုံးပြီးတော့ တစ်ခန်းလုံးရှင်း လင်းကာ ပိုင်ရှင် လာကြည့်ရင်အသင့်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်။
အဟင်း....ရန်နိုင်နှင့် ကျွန်တော်တို့ အတူရှင်သန်နေထိုင်ကြတာ လတွေနှစ်တွေတိုင်လာတဲ့အထိ နွေးထွေးဆဲ ရင်ခုန်သံတွေဆူဝေနေဆဲ။ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆက်ဆံပက်သက်တုန်းကလို ခံစားရဆဲ လိင်ဆက်ဆံမှုအပိုင်းမှာလေ။ ဘယ်လောက်အံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ ပေါင်း သင်းဆက်ဆံရေးကို ရခဲ့ရပါလိမ့်။ ဒုတိယလူတွေ အဖြစ်မှသည် အချစ်ဆုံးတွေဖြစ်ကုန်တော့တာ။
တစ်ယောက် အိမ်စောပြန်ရောက်ရင် နောက်တစ်ယောက်က ကြိုဆိုနေတာ ၊ စားသောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပေးတတ်ကြတာ။ အလုပ်အ ကြောင်း ကူညီစဉ်းစားအကြံဥာဏ်ပေး လုပ်ဆောင်ပေးတတ်ကြတာ။ ကလေးတွေဆီ နှစ်ကိုယ်တူ သွားကြည့်ဖြစ်ကြတာ။ အိုး....ဒါ ကြီး မားတဲ့ ဆုလာဘ်ကြီးတစ်ခု နှစ်ဦးသားလက်ခံရရှိထားခြင်းပေါ့။
'လမ်းပေါ်က မီးရောင်တွေကြည့်ရင်း လေညှင်းခံရင်း ဟိုဘက်အိမ်က ကောင်ချောလေးကို စတွေ့တုန်းက ပုံစံလေးပြန်တွေးကြည့် နေတာ'
Alex aung (26.6.2010)
Posted by Alex Aung at 4:13 PM No comments:
Hey I know that this isastrange story, but it is true as sure as I set here typing it.
ကျွန်တော့် အသက် ၃၇နှစ်ရှိပါပြီ။ ဂေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီလိုဖြစ်နေခြင်း အကြောင်းကြောင့် ကျွန်တော့်မိန်းမနှင့် လမ်း ခွဲဖြစ်ခဲ့တာလည်း ၆နှစ်ရှိပါပြီ။ သိတယ်....ကျွန်တော် သိပါတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လောက်ရူးနှမ်းတဲ့လူဆိုတာ။ ကျွန်တော် straight guy တစ်ယောက်လို တွေးခေါ်နေထိုင်ဆက်ဆံနိုင်နေရဲ့နဲ့ gay life ကိုပိုမိုနှစ်သက်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လမ်းခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါ တယ်။ သူမကတော့ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ ပြန်လည်လက်ထပ်သွားပြီဖြစ်ပြီး အဲဒီအမျိုးသားဟာ သူမနဲ့ အတော့်ကို သင့်တော်အ ဆင်ပြေတာကိုသိရတော့ ကျွန်တော်ဝမ်းသာရပါတယ် ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ သူမအတွက် မှန်ကန်တဲ့ လက်တွဲဖော် ဘ၀အဖော်ဖြစ်စေဖို့ ဆန္ဒပြုပါရဲ့။ ကျွန်တော်နှင့် သူမတို့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့တာ အသက်(၁၇)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ 'သုတ' ဆိုတဲ့ သားလေးက ရလာဒ်ကောင်း တစ်ခုပါ။ သုတ ဆိုတဲ့ကျွန်တော့်သားဟာ အလွန့်ကိုယောက်ျားပီသပါတယ် စိတ်ဓာတ်ရော အမူအကျင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူက ကျွန်တော်ဘာ ဆိုတာ သိနေသလို ကျွန်တော့် ပါတနာတွေနှင့် တစ်ချို့ညတွေဖြတ်ကျော်နေခြင်းအပေါ်လည်း ပြဿနာ အဖြစ်မယူဆ ပါဘူး။ သားအ တွက် အဓိက တပ်မက်မှုဟာ ကျွန်တော်နှင့် အတူနေထိုင်ရခြင်းပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ duplex home တစ်ခုမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ အဓိက၀င်ပေါက်ကြီးကတော့ တစ်ခုတည်း။ ၀င်ပေါက်ကြီးက ၀င်လာပြီး ညာဘက်လှေကား အတိုင်း တက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့် တိုက်ခန်းကို ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်ဘက်ကို ချိုးမယ်ဆိုရင်တော့ ရန်နိုင်ရဲ့ တိုက်ခန်းကို ရောက်သွားမှာပါ။ လှေကားအကြီးကြီး တစ်ခုကနေ လှေကားသွယ်နှစ်ခုခွဲထားခြင်းပေါ့။ ဒီတိုက်ကိုဆောက်လုပ် ထားပုံကပညာသားပါပါ တယ်။ တိုက်ခန်းနှစ်ခုကို မျက်နှာခြင်းဆိုင်ဆောက်လုပ်ထားပြီး နှစ်ခုကြားမှာ လေသာဆောင်ကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ဒီဇိုင်းလှလှထည့် ထားခြင်းပါ။ အပြင်ကကြည့်ရင်တော့ အိမ်အကြီးကြီးတစ်လုံးတည်းပါ။ ကျွန်တော့်အခန်းနဲ့ သူတို့အခန်းကို ၀ရံတာလေးတစ်ခုက နီးကပ် အောင်ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ နောက်ဖေး အရေးပေါ်လှေကားဘက်သွားတဲ့အခြမ်းမှာလည်း ထိစပ်နေ ပါတယ် လမ်းသွယ်လေးတစ်ခု နှင့်ပေါ့။
ဒီ Apartment မှာကျွန်တော်နေဖြစ်တာ တစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်က မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းကို စုံတွဲ အသစ်ပြောင်းလာတာကို မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ကျွန်တော် သတိထားမိပါတယ်။ အလုပ်သမားအချို့ပစ္စည်းတွေ သယ်ဆောင်နေရာ ချပေးနေတာကို စောင့်ကြည့်မိရရင်းပေါ့။ ကျွန်တော် သူတို့ဆီ လျှောက်လှမ်းသွားလိုက်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် 'ဦးဇော်အောင်' ပါပေါ့။ လူငယ်ယောက်ျားကလည်း သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပေးပါတယ် 'ရန်နိုင်'ပါတဲ့လေ။
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ အလာပ သလာပပြောဆိုရင်း တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် ပြောဆိုနေဖြစ်ကြပြီးနောက်မှာ ရန်နိုင်ရဲ့ အမျိုးသမီး 'ဆွီတီ'နှင့် သိကျွမ်းရပါတယ်။ သူမကိုကြည့်ရတာ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စအတွက် အလိုမကျမှုတစ်ခုခုဖြစ်နေဟန်တူပါတယ်။ သူတို့ ဒီကိုရောက်ဖို့ 'ထင်းရှူးမြိုင်'မြို့တော်ကနေ လေးရက်လောက် ကားမောင်းလာခဲ့ရတာကြောင့်လည်းပါမှာပါ။
ဧည့်ခန်းကနေ လှမ်းမြင်နေရတဲ့ မီးဖိုချောင်မှာ ဆွီတီ ဂတ်စ်မီးဖိုနှင့် အလုပ်စဖို့ဟန်ပြင်နေတာကို သိလိုက်ရတော့ သူတို့ကို ညစာ အတွက် အိမ်နီးချင်းအသစ်ကို ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ ကျွေးပါရစေလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ မီးဖိုချောင် တံခါးကို ခေါက်လိုက်တော့ ရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ တံခါးခေါက်သံကြောင့် သူမလန့်သွားပုံရပေမယ့် ကျွန်တော့်အပြောကြောင့် ကျေနပ်သွားပုံတော့ရပါရဲ့။ 'ကျေးဇူးတင်ပါတယ်' တဲ့ ရန်နိုင်က။
ကျွန်တော့်လက်ရာဟင်းတွေနှင့် သူတို့ထမင်းစားမြိန်ကြတာကိုတွေ့ရတော့ ၀မ်းသာရပါတယ်။ မြန်မာထမင်းဟင်းသာမက တခြားစား ကောင်းတာမှန်သမျှ ကျွမ်းကျင်အောင်ချက်တတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ဝါသနာက အသုံးတဲ့ပါ့။ စားသောက်ပြီး ပြန်ခါနီးမှာတော့ လင်မယားနှစ် ယောက်လုံးက 'နွေးနွေးထွေးထွေးကြိုဆိုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်' လို့ပြောဆိုနှုတ်ဆက်သွားကြတာ ကျေနပ်ရပါတယ်။
ရက်တွေကများလာတော့ ၇ရက်တစ်ပတ်လောက်အကြာ ကျွန်တော် စပြီးသတိထားမိစပြုလာပါတယ် ဆွီတီနှင့် ရန်နိုင်တို့ တစ်ယောက် နှင့်တစ်ယောက် အမြဲငြင်းခုန်နေကြတာကို။ ဆွီတီဟာ ကျွန်တော့် ex ကိုသတိရအောင်ပြုသလိုပါပဲ။ ရန်နိုင့်အတွက် ကျွန်တော်စိတ်မ ကောင်း ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆွီတီပြောနေတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ အတော်ခံရခက်တာပဲ။ သူမသာ ကျွန်တော့်မိန်းမဖြစ်ကြည့် လည်မျိုကို လက်သီးတွေ ပစ်ကျွေးလိုက်ပြီးပြီ။
မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ သတင်းတစ်ခုသိလိုက်ရတယ်။ ဆွီတီ Library တစ်ခုမှာ အလုပ်ရသတဲ့။ 'မိုးကောင်းကင်ရေ ကျေးဇူးပဲ'လို့ ပြောမိရ ပါတယ် ကြားကြားခြင်း။ သူမက နေ့ပိုင်းမှာ အလုပ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်က ညနေပိုင်းမှ မြို့ထဲက ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် အထူးကု ဆေးခန်းကြီးကိုသွားတယ် အဲဒါဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲ? သူမ အိမ်မှာရှိချိန်ဆို ကျွန်တော်မရှိဘူးလေ။
ဒီနေ့မနက်မှာတော့ ရန်နိုင် နောက်ဘက်ဝရံတာမှာ နေပူစာလှုံနေတာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ သူ့ရဲ့ တောက်ပ၀ံ့ကြွားဖွယ်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြာ ကြာကြည့်မိခဲ့သလားမသိ။သူ့ထက်ပိုပြီး ကြည့်ကောင်းတဲ့ ပြီးတော့ အားလုံးအချိုးအဆစ်ပြေပျစ်သူမျိုးမမြင်ခဲ့ဖူးဘူး။ gym ကောင်း ကောင်းဆော့ထားတဲ့ ရေကူးသမားဘော်ဒီမျိုးကို သူပိုင်ဆိုင်တာပဲဗျ။ ပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့ abs, အားလုံးကောင်းတဲ့ pecs တွေ၊ ပြီးတော့ သူ့ပေါင်တံနှင့် ခြေသလုံးတွေက ထုကောင်းကောင်းနှင့် အမြှောင်းမြှောင်းထလို့။ သူ့လက်မောင်းတွေကလည်း နှစ်များစွာ ၀ိတ်မခဲ့တဲ့ အကြောင်းသက်သေထူနေသလို အလွန့်ကိုကောင်းတဲ့ biceps နဲ့ triceps တွေကလည်း ၀ံ့ဝံ့ကြွားကြွးပါ။ WOW! လို့ အသံထွက်စေ မယ့် မြင်ကွင်းပါပဲ။
ပြတင်းပေါက်ကနေ မြင်တွေကကြည့်ရှုရပြီးနောက် ကိုယ့်ဖာသာတွေးမိပါရဲ့။ ကျွန်တော်ဟာ diet လုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တူနေပြီ လေ အခု။ ဓာတ်ပုံထဲက စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေကို မြင်နေရသူလို ကြည့်နိုင်တယ် ဒါပေမဲ့ စားလို့မရ။ ဘယ်လောက်ရှုံးလိုက်သလဲ မနက်ခင်းတိုင်း ရန်နိုင် ဒီအတိုင်းနေပူစာလှုံနေကျအချိန်တိုင်း ခံစားရတဲ့ဖီလင်ပါပဲ။ သူလည်း အေးဆေးဖြစ်မှာပေါ့ အလုပ်က ညဘက်ပဲ ဆိုတော့ကာ။ ဟုတ်တယ်....သူလည်း ညပိုင်းမှ အလုပ်လုပ်သူ။
နေပူစာလှုံတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေ မြင်ခဲ့ရပြီး တစ်လလောက်အကြာ မီးဖိုချောင်ထဲက ရေခဲသေတ္တာ နားရပ်နေတုန်း မီးဖိုချောင်ဘက်ခြမ်း တံခါးကို ခေါက်တဲ့အသံကြားလိုက်ရတယ်။ သူ....ရန်နိုင်။ ကျွန်တော် ရင်ထဲဒိတ်ကနဲတောင်ဖြစ်သွားရတယ်။ ရှပ်လက်ပြတ်အင်္ကျီ၊ boxer အောက်ခံဘောင်းဘီဝတ်ထားတဲ့သူ။ ကျွန်တော်...ကျွန်တော်..... တံတွေးကို အယောင်ယောင်အမှားမှား မျိုချမိရရင်း အထဲဝင်ဖို့သူ့ကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
'ဟို....ညီကော်ဖီတစ်ခွက်လောက် သောက်ချင်လို့ဗျ။ ဒီနေ့မနက် ဆွီတီ ဘာမှမလုပ်သွားဘူး ညီ့အတွက် မနက်စာ'
'ကောက်ဖီလောက်နဲ့တော့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွာ မနက်ခင်းတိုင်း ကိုယ့်အတွက်ပိုနေတာ သွန်တောင်ပစ်ရတယ်။ မုန့်ပါကျွေးမယ် လာကွာ'
'ဒီမိန်းမက ပြောင်းလာပြီးကတည်းက အချိုးတွေပြောင်းနေတယ်လေ'
'Yeah, ငါကြားပါတယ် မင်းမိန်းမဘာတွေမင်းကို ဟစ်နေတယ်ဆိုတာ'
ရန်နိုင်က ကျွန်တော်ကမ်းပေးသော ကော်ဖီခွက်ကို ယူလိုက်ကာ 'အစ်ကိုကမှ အထာကျတာ၊ ချည်နှောင်မဲ့ မိန်းမလည်းမရှိဘူး၊ ကလေး ပေါက်စလည်းမရှိဘူး။ ညီ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးကြောင့် နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းမှာ အ ဆင်ပြေပြေထားနိုင်တယ်။ မနက်ခင်းတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးရပြီး ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာလေးတွေ လုပ်လို့ရတာ'
လောကကြီးတစ်ခုလုံး ကျယ်ပြန့်သွားသလို ခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေက horny အရမ်း ဖြစ်လာသလိုပဲ။ ထိလိုက်တာနဲ့ ကြွ တက်လာဖို့အသင့်ဖြစ်နေတတ်တော့တာ အခု။
ကျွန်တော်သူ့မျက်နှာကို ကြည့်လိုက်ပြီး 'မင်း...ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ညီ?'
'အစ်ကိုတွေးကြည့်လေ , NO Sex , ဆွီတီအနေနဲ့ အနည်းဆုံး ညီ့အတွက် handjob ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပေးသင့်တယ် မထင် ဘူးလား? လင်မယားတွေဖြစ်ပြီး'
'ဟေးညီ....သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆိုတာ ဘာလုပ်ဖို့လဲ? နားထောင်ပေးရမယ် အကြံဥာဏ်ကောင်းပေးတတ်ရမယ်လေ..ပြောပါကွ'
ရန်နိုင် မျက်နှာအမူအရာနည်းနည်းပြောင်းသွားပြီးနောက် 'ညီဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ အစ်ကိုသိရင် ဆွီတီ အမြဲတစေ သွေးအေးတယ် ဆိုတာ သိရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ညီကပဲ ထူးဆန်းတဲ့ ဘဲတစ်ပွေဖြစ်နေသလားမသိ sexual အကြိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး'
'Anal sex ကိုညီအရမ်းလုပ်ချင်တာ သူကငြင်းတယ် အဲဒါကို။ ပြီးတော့ ငပဲကို ပါးစပ်နဲ့ပြုစုပေးဖို့ပြောတော့လည်းမရ။ ကျွန်တော်ဘယ်လို ဖီလင်ရှိတယ်ဆိုတာ သူမစဉ်းစားပေးဖူးဘူး။ သူထင်တာက အဲဒီလိုလုပ်တာဟာ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းတယ်၊ ညစ်ညမ်းပြီးရွံ့စရာကောင်း တယ်လို့။ သူ့ပါးစပ်ထဲ ညီ့ပစ္စည်းထည့်ဖို့ဝေလာဝေးရောပဲ'
'ပြီးတော့ ပုံမှန် sex အတိုင်းဆက်ဆံဖို့ ကြိုးစားတော့လည်း နာတယ်၊ ကိုယ်ခဲတယ်၊ ခေါင်းကိုက်တယ် ဒါတွေပဲပြောတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုထားပြီးမှ ဘ၀ကို -ွင်းထုပြီးဖြတ်သန်းရမှာလားဗျ။ အဲဒါ...အခုလေ....ညီ့အဲဒီဖီလင်တွေကို တစ်ယောက်ယောက်နှင့် ပတ်သက်ပြီးဖြေဖျောက်ချင်နေမိတာ....'
ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်ပါတယ် မေတ္တာမရှိရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွံစရာကောင်းနေတာပါပဲ။ သူတို့က လင်မယားကိစ္စမှာ ဘာတွေထည့်တွက် နေသလဲမသိဘူး။ တစ်ယောက်အကြိုက်တစ် ယောက်ပေါ့လေ...။ အခုတော့ ကျွန်တော်သတိထားမိတယ် ရန်နိုင့်ဘောင်းဘီတိုဟာ မိုးကာတဲကို တုတ်ထောက်နဲ့ထောက်ထားသလို ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ။ ထောင်မတ်နေတာများ အခိုင်အမာကိုဖြစ်လို့။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေ အာခံတွင်းတွေမှာ သွားရည်တွေယိုထွက်ကျလာပြီလားမသိ နှုတ်ခမ်းကို လျှာနှင့်တစ်ချက်သရပ်မိရပါတယ်။
'ရန်နိုင် မင်း blowjob ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးတာကို ရခဲ့ဘူးလား? စုပ်ရုံပဲစုပ်တဲ့ အတွေ့အကြုံမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ တကယ့်ကို ညင်သာတဲ့၊ နာကျင်မှုမရှိတဲ့၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု tempo ကိုမြှင့်ပေးတဲ့ ဖီးလ်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ မျိုးကိုပြောတာ'
သူ ကျွန်တော့်ကိုပြန်ဖြေဖို့ တံတွေးတစ်ချက် ခက်ခက်ခဲခဲမျိုချလိုက်ရင်း 'အဲဒီလို ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုရမဲ့ ဖီလင်မျိုး ညီမခံစားခဲ့ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ညီ အဲဒီ့ဖီလင်မျိုးကို အမြဲရချင်နေမိခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲ'
သူထိုင်နေရာ ခုံဆီကျွန်တော်လျှောက်လှမ်းသွားလိုက်ပြီး ပြောမိလိုက်တာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် မရှက်နိုင်တော့ဘူး...'Stand up'
သူ့ကြည့်ရတာ နည်းနည်းရှိုးတို့ရှန့်တံ့ဖြစ်သွားပေမယ့် ထရပ်လိုက်ပါတယ်။ ခြောက်လက်မကျော်လောက်တဲ့ ထိပ်အရေပြားဖြတ်မထား တဲ့ သူ့ညီဘွားက ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးကနေ ကျော်ထွက်နေရဲ့။ အဲဒါကို သူက ငုံ့ကြည့်ပြီး တောင်းပန်သေးရဲ့ သူဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင် လို့ပါဆိုပဲ။
သူ့ပေါင်ကြားက ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့ ခပ်ထွားထွား တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင် အကြောတွေဖြာနေတဲ့ ငပဲကို လှမ်းကိုင်လိုက်ကာ ထိပ် အရေပြားလေးကို ရှေ့နောက်တိုးကြည့် လက်ကလေးနှင့် ကွမ်းသီးခေါင်းကို ပွတ်ကြည့် လုပ်မိပါရဲ့။ ရန်နိုင်မျက်လုံးပြူးသွားပြီး အာ.. အစ်ကို ဘာဖြစ်တာလဲဗျ
'ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာ၊ မင်းပဲ blowjob နှင့် anal sex တွေအကြောင်းအမြဲမင်းပြောနေတာ အခုလက်တွေ့လုပ်ပြမလို့လေ'
သူ့မျက်နှာက အပြုံးတွေဝေလာပြီး 'အစ်ကိုလည်း အဲဒါမျိုးတွေ ကြိုက်တယ်ဟုတ်လား?'
'ဒီလိုလုပ်ပေးရတာကို တပ်မက်တာကွ။ ဒါပေမဲ့ မင်းငါ့ကို လက်သီးနဲ့မထိုးရင် ဒါမှမဟုတ် ထွက်မပြေးသွားရင်တော့ လုပ်ပေးချင်တာပေါ့'
'အစ်ကို ညီ့ -ီးကိုစုပ်မပေးချင်ဘူးလား?' သူက အဲဒီလိုမေးရင်း လှပထွားကျိုင်းတဲ့ ကျောက်သား ကျောက်ဆိုင်လို မာနေတဲ့ လဒစ်ကို ဂုဏ်ယူစွာ ဝှေ့ယမ်းပြပါတယ်။
'ရန်နိုင်...အဲဒါကိုပြုစုပေးရရင် ကိုယ့်အတွက် အရမ်းတာပေါ့ကွ'
'အရမ်း အိုကေတာပေါ့။ ကိုယ်တို့ အချိန်လေးတွေဆုံးရှုံးမှုမရှိတော့ဘူး..That's good'
'အစ်ကိုက ပြုစုပေးမှာဆိုတော့ ညီဂုဏ်ယူပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြိုက်တယ်'
ရန်နိုင့် ကိုယ်ခန္ဓာကို မီးဖိုချောင်ထဲက ကောင်တာတစ်ခုပေါ်မှီစေလိုက်ပြီး သူ့ဗိုက်သား၊ ရင်အုပ်စတာလေးတွေကို အသာပွတ်သပ် ကြည့် ကာ သူ့boxerဘောင်းဘီတိုကို တဖြည်းဖြည်း လျှောပြီး ချွတ်လိုက်တာ ခြေထောက်ကိုကြွပြီး ဖယ်ပေးပါတယ်။ ဘောင်းဘီမရှိတဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ ပေါင်သားတွေက ကြွက်သားအမြှောင်းမြှောင်းနဲ့။ သူ့-ီးကြီးကလည်း ကျွန်တော့်ပါးစပ်ရှိရာကို တန်းကနဲချိန်ထားတာ မတ် လို့ပါ။ ဆီးစပ်က အမွှေးနုလေးတွေက မဲပြီး သန်လှပါရဲ့။ ကျွန်တော် သူ့ဟာဆီကနေ အနံ့တစ်မျိုးရနေပါတယ် အဲဒီ့အနံ့ကို တကယ် ကြိုက်တယ်။ ကိုယ်ချွေးနံ့နဲ့ ရေမွှေးဆပ်ပြာနံ့နှစ်ခု mixed ဖြစ်နေတဲ့အနံ့က လူကို မူးယစ်ရီဝေစေသလိုပါပဲ။
ဒစ်ကိုကိုင်လိုက်တော့ နည်းနည်းတွန့်သွားပေမဲ့ ရုန်းတော့ မရုန်းဖယ်ပါဘူး။ ပူနွေးနေတဲ့ -ီးထွားထွားကို ကိုင်ကြည့်တော့ နုညံ့ပြီးတင်း နေတာ အရေပြားကလည်း ကွမ်းသီးခေါင်းပေါ် ခပ်တင်းတင်း။ လက်နဲ့အသာကိုင်ပြီးနောက်ကို ဆွဲလိုက်ချိန်မှာတော့ ပေါ်လာတဲ့ ပန်း သွေးရောင် -ီးတံကြီးက ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ သွားရေတွေ စိုရွှဲစေပါတော့တယ်။ ရန်နိုင်ကိုမေးလိုက်မိတယ် 'မင်းငပဲကို အခြား ယောက်ျား လေးတစ်ယောက်ယောက်က ကိုင်တွယ်ဖူးလား၊ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု တစ်ခုခုပေးဖူးလား?' လို့ဆိုတော့ သူငယ်ငယ်ကနေ အခုအချိန်ထိ သူကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ မကိုင်ဖူးဘူးဆိုပဲ။ ကျွန်တော်သူ့မျက်ဝန်းတွေကို နူးညံ့စွာစိုက်ကြည့်မိပြီးသကာလ 'မင်းမျက်လုံး တွေကို မှိတ် လိုက်ညီ.....မင်းကို ကောင်းကင်ဘုံဆီ ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းတွေ လျှာတွေနှင့် ခေါ်သွားမယ်'
ကျွန်တော် ပြောနိုင်တာကတော့ သူအမျှော်လင့်ကြီးစောင့်စားနေတဲ့ အပြင်းပြဆုံး အာသာဆန္ဒအရသာကို ခံစားဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်က pre-cum လေးတွေ ထွက်စပြုနေတာကိုကြည့်ပြီး သိရတော့တာပေါ့။ မီးဖိုချောင်တံခါးကနေ ၀င်လာတဲ့ နေရောင် ခြည်တန်း တွေကြောင့် ရန်နိုင့်တစ်ကိုယ်လုံး ၀င်းဝါနေသလို ပေါင်ကြားက ဟာကြီးကလည်း အားရစရာမြင်နေရပါတယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်း လေးကို အသာငုံပြီး နွေးထွေးမှုပေးတော့ 'ရှီး'...ဆိုပြီး ရန်နိုင်တိုးတိုးညည်းတယ်။ သူ့ရင်အုပ်တွေ ဗိုက်သားလေးတွေကို တက်မက်စွာနမ်း မိရပါပြီ။ ကျစ်လစ်သန်မာလိုက်တာ။
ထူအမ်းအမ်း ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေ နားရွက်ဖျားလေးတွေကို ပွတ်တိုက်ထိခတ်တဲ့အခါ ခပ်တိုးတိုး ညည်းသံနှင့်အတူ သူ့ငပဲ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ မတ်သွားတာကိုတော့ သတိပြုမိပါရဲ့။ အသက်ရှူသံတွေကလည်း ပုံမမှန်ပြင်းပြတဲ့အပြင် သူ့လက်ချောင်းတွေကလည်း ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေကို နှစ်သက်စွာ ပွတ်သပ်ထိုးဖွနေတာ အလွန်ကြိုက်တဲ့အရသာကို ခံစားနေတာလား ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုပေါ့။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အလုပ်နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်တည်း စလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့တုတ်ခိုင်သန်မာတဲ့ ငပဲ ကိုဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် တင်းကျပ်စွာကိုင်ပြီး ထုပေးဖြစ်သလို ကိုယ်ပိုင်ညီဘွားကိုလည်း ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် ရှန်တိန်လုပ်ဖြစ်တာလေ။
သူ့အရှိန်တွေ ဘယ်လောက်မြင့်လာသလဲဆိုရင် တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်တော့် လျှာအမွှေ နှုတ်ခမ်းများဖြင့် အစုပ်မှာရော ဘယ်လက်နှင့် ပွတ် သပ်ပေးမှုအရပါ ဒူးတွေညွှတ်ပြီး ရိုင်ချင်သလိုလိုဖြစ်ရဲ့။ 'အိုး....ရှီး...အစ်ကို...Oh...Shit!'
'Yeah, ညီသိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကြုံဖူးသမျှဖီးလ်တွေထက် အကောင်းဆုံးပဲဗျ'
မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ သူ့ငပဲကို အသာကိုင်ရင်း ထိပ်အရေပြားလေးကို နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုနှင့် အသာညှပ် လျှာကလေးနှင့် ကွမ်းသီး ခေါင်းကို လျှက် အပေါက်ဝကလေးကိုလည်း ကလိပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ကနေ တဖြည်းဖြည်း အနမ်းပေးကာ ရွှေဥတွေကို ဖွဖွကိုက်ရင်း တစ်လုံးခြင်း ငုံကစားရင်း တင်ပါးတွေကို လက်ဖ၀ါးဖြင့် မထိတထိပွတ်သပ်ပေးနေမိရဲ့။ သူ မျက်စိတွေမှိတ် ခြေချောင်းလေးတွေကွေးကောက်ရင်း 'Oh...Jesus!'
သူ့ပါးစပ်ကညည်းညူသံလေးတွေ အစကတော့ ခပ်တိုးတိုးဖြင့် နောက်တော့ အရှိန်တက်လာကာ ကြားရသူပင် ဖီးလ်အရှိန်မြင့်ရကာ ညာဘက်လက်ကို ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားဖြစ်ရပေါ့နော်။ -ိင်တံတစ်ချောင်းလုံးနှုတ်ခမ်းသားများဖြင့်စုပ်ယူရင်း အဆုံးထိမျိုလိုက်ကာ အထုတ်အသွင်းပြုချိန်မှာတော့ သူကျွန်တော့်ခေါင်းတွေ၊ ပခုံးတွေကို ကိုင်ကာအားပြုရင်း အရှိမြှင့်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်း မှာ ချောဆီနည်းနည်း သုတ်ရင်း သူ့ခရေ၀ကိုမသိမသာ ချောဆီထပ်သုတ်ပေးရင်း အတွင်းထဲထည့်လိုက်ရင်း သူ့ prostate ကို မထိထိ အောင် စလိုက်ပါတယ်။ ချောဆီတွေကြောင့် လက်ချောင်းတချို့ထည့်ထားတာကို သူမသိပေမဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ တုံ့ပြန်မှုခပ်ပြင်း ပြင်းဖြင့် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းရဲ့တင်းကြပ်စွာ စုပ်မျိုထားမှုကို ဖြတ်သန်းလျှက် ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို အထုတ်အသွင်ြး့ပုပါတော့တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ပါးစပ်ထဲတွင်မက လည်ချောင်းထဲထိရောက်ရောက်သွားရသေး။
'Holy Shit! Ah....Ah...Ahhhhhh....'
ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းများကတစ်ဆင့် သူ့ရွှေရည်တွေစီးကျလာတာ အတော့်ကို ပမာဏများပါရဲ့။ ကျွန်တော့် ညာဘက်လက်များမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်ဖြူဖြူပျစ်ပျစ်တွေနှင့် အပြည့်။ ရန်နိုင်ကျွန်တော့်ကိုဖက်ပြီး ရှက်ရယ်ရယ်လိုက်ကာ 'အစ်ကို....ညီဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး အပြုအစုမှာမျောပါသွားတယ်ဗျာ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဟိုက်သွားတာ' လို့ပြောပါပြီ။ ထို့နောက် ထပ်ပြုံးလိုက်ရင်း ပြောပြန်တာက 'အရမ်းကောင်းတာပဲဗျာ....ဒီနေ့အတွေ့အကြုံကို ကျွန်တော်အမှတ်ရနေတော့မှာ' တဲ့လေ။ ကျွန်တော် 'ရန်နိုင်'မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်း ခံစားရမိတာက သူ့ကို လုံးဝချစ်မိသွားပြီဆိုတာ။ God, သူဟာ ကျွန်တော့်အတွက် လှပပြည့်စုံသူတစ်ယောက်၊ ချစ်သူတစ်ယောက်အဖြစ် ပိုင်ဆိုင်ချင်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်သိပါတယ် အဲဒီ့ကိစ္စကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ။
တစ်ပတ်လောက်အကြာ မီးဖိုချောင်စားပွဲမှာ ကျွန်တော်ထိုင်နေတုန်း ကြားလိုက်ရတာက ရန်နိုင် မီးဖိုချောင်ဘက်က တံခါးဖွင့်သံကို ကြား လိုက်ရတယ်။ ခဏကြာတော့ ကျွန်တော့်နောက်ဘက်က တံခါးခေါက်သံကြားလိုက်ရပါရော။ သူ...ရန်နိုင်ပါပဲ။ ညအိပ်ဘောင်းဘီတို နှင့် အပေါ်ဗလာ...ရင်ဘတ်မှာ အမွှေးနုလေးတွေ..oh...so sexy..သူ့တကိုယ်လုံးကို ငေးကြည့်မိရပြန်ပေါ့ တစ်ခါ။ သူ့အကြည့်တွေကလည်း ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းဆီငေးလို့။
ကျွန်တော် သတိပြုမိရတာက သူအခုမှအိပ်ယာက ထထွက်ခဲ့ဟန်တူတာကိုလေ။ တံခါးဝမှာအတန်ကြာ ရပ်ငေးနေရင်းမှ လှမ်းလာကာ ခုံမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်။ 'အစ်ကို....ညီ့ကိုဘာတွေလုပ်ထားသလဲ? ပြုစားထားသလားဗျာ အစ်ကို့အကြောင်းတွေ မတွေးဘဲ မနေနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ အစ်ကိုနဲ့အရမ်း-ိုးချင်နေတာ။ ကျွန်တောနဲ့အစ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာတွေ အတွေးထဲအမြဲရောက်နေတာဗျ'
'မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ အဲဒီကိစ္စက အကောင်းဆုံး sex အတွေ့အကြုံပဲကျွန်တော့်ဘ၀မှာ။ ပြီးတော့ ပိုပြီးလိုချင်သေးတယ်။ ဆွီတီနှင့်တောင် မလုပ်ချင်တော့ဘူး။'
'ဟုတ်တယ်ဗျ။ ညီ့ -ီးက တစ်ပတ်လုံးလိုလို မာမာနေတာ။ ရုံးမှာတောင် ဒုက္ခရောက်တော့မလို့။ ညီတို့ sexual ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကို တွေးနေမိတာလေ။'
သူ့လက်ကို ဆွဲကိုင်ကာ အိပ်ခန်းဆီခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ့ကိုအိပ်ယာပေါ်နောက်ပြန်ကျအောင် တွန်းလှဲလိုက်ပါတယ်။ 'မင်းပြောတာနော် တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့၊ အခုကိုယ်တို့ အစစ်အမှန် man to man sex လုပ်ကြတာပေါ့ ' သူ့ရှေ့မှာပဲ အ၀တ် တွေအားလုံးချွတ်ပစ်လိုက်သလို သူ့ဘောင်းဘီကိုလည်း ဆွဲချွတ်လိုက်ကာ ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်စေတော့တာ။ ရန်နိုင့်ရင်အုပ်ထွားထွားပေါ်က နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ဗိုက်သားလေးတွေ ဆီးစပ်က အမွှေးနုလေးတွေကို အသာနမ်းရင်း လျှာဖြင့် ကလိဖြစ်သေးရဲ့။ ပြီးတော့ ခပ်ထွား ထွား ထိပ်အရေပြားဖြတ်မထားတဲ့ သီးမွှေးငှက်ပျောကြီးကိုလည်း အာခံတွင်းထဲထည့်ကာ အထုတ်အသွင်းပြုဖြစ်ရပါတယ်။
ကျွန်တော့်စိတ်တွေဟာ ပေါက်ကွဲတော့မယ့် မီးတောင်ထိပ်ဝကချော်ရည်တွေလိုပါပဲ အရမ်းပူလောင်နေပြီ။ သူ့ကိုတပ်မက်လွန်းနေတော့ ဘာမှမမြင်တော့ပါဘူး။ ကုတင်ဘေးက ဘီရိုပုထဲမှ Lube ပုလင်းကိုထုတ်ကာ ကျွန်တော့်ချယ်ရီပေါက်မှာ များများထည့်၊ နောက်ပြီး သူ့ငပဲ မာထောင်ထောင်ကိုသုတ်လိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့အမေးကိုကြားရတာ ကလေးတစ်ယောက်က မမြင်ဖူးတဲ့ ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းကို အဲဒါဘာကြီးလည်း မေးတဲ့ဟန်။ ကျွန်တော်သူ့မျက်ဝန်းတွေကို ပြုံးပြီးကြည့်မိရရင်း 'ရန်နိုင်...ဒီလိုကိစ္စကို တခြားနေ့တွေကတည်းက လုပ်ချင်နေခဲ့တာကွ' လို့ပြောလိုက်တော့ သူက 'What?'
ပက်လက်အိပ်ရင်း မိုးပေါ်ကို အမြှောက်လိုချိန်နေသော ရန်နိုင့်အပေါ်သို့ အသာ ကားယားခွရပ်လိုက်ရင်း သူ့ငပဲကို ကိုင်ကာ ကျွန်တော့် ချယ်ရီပေါက်မှာတေ့ရင်း သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ရန်နိုင် အခုမှ ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားရင်း သွားတွေ ပေါ်လာတဲ့အထိပြုံးကာ သူ့ခါးကို အသာကော့ ခပ်ဖြေးဖြေး ထိုင်ချနေတဲ့ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေနဲ့ သူ့ရွှေဥတွေထိကပ်တဲ့အထိ ဖိကပ် လိုက်ပါတော့တယ်။ သူ့ရွှေဥတွေနဲ့ တဖတ်ဖတ် ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေ ကိုထိခတ်တာ ခံစားရချိန်မှာ သေဆုံးပြီး ကောင်းကင်ဘုံကို ရောက်နေသည့်အလား ခံစားရပါရော။ သူ့-ီးဆိုဒ်ဟာ ကျွန်တော့် prostate ကို ဖိနှိပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးဆိုဒ်ပါပဲ။ ထိထိသွားတိုင်း ကျွန်တော့်မှာ ပွဲသိမ်းမိတော့မတတ်။ ကျွန်တော် cloud nine ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုပေါ်လွင့်မျောနေသလိုပါ။ ခဏနေတော့ သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ခါးကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ရင်း သူ့-ီးအရင်းထိအောင် ဆွဲဆွဲချကာ အကြိုက်လုပ်ပါတော့တယ်။
ပင့်ဆောင့်ရင်း ခဏကြာတော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာကို ထပြီးဖက်ကာ လေးဘက်ထောက်အနေအထားဖြစ်အောင် သူပြုပြင်ပေးပါတယ်။ သူပြုတဲ့အတိုင်း အနေအထားကို အလိုက်သင့်နေပေးလိုက်သောအခါတွင်မှာတော့ ကျွန်တော့်ခါးကို ကိုင်ကာ အထုတ်အသွင်းလုပ်တာ များ သန်မာတဲ့မြင်းတစ်ကောင်ကို ဒုံးစိုင်းမောင်းတဲ့အတိုင်းလေ။ သူဆောင့်ပြီးသွင်းတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော့် Male G-spot ကိုထိထိမိမိဖြစ် တာ အရမ်းကိုကောင်းလွန်းပါတယ်။
သူဆက်ဆံခဲ့သမျှ လိင်အတွေ့အကြုံထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ဟန်တူပါတယ် ရန်နိုင့်ကိုကြည့်ရတာ။ တစ်ခါတစ်ခါဆောင့်လိုက်တိုင်း ကျွန်တော့်ချယ်ရီကြွက်သားတွေနှင့် ညှစ်ညှစ်ပေးလိုက်တာမှာ သူ့အတွက် climax ဖြစ်ဖို့နီးကပ်စေပါတော့တယ်။ သူကလည်း အဆုံး ထိလေးငါးချက်လောက်ဆောင့်လိုက် ကွမ်းသီးခေါင်းထိထုတ်လိုက်နဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဟာတာတာဖြစ်ဖြစ်သွားရတာ။ သူ့အသက်ရှူ သွင်းရှူထုတ်လုပ်တာများ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြားရသလို တစ်ကိုယ်လုံးလည်းချွေးတွေ။ အိမ်ထောင်သည်ပီပီ ပုံစံမျိုးစုံသူပြုစု တတ်တယ်။ ကျွန်တော် သုခဘုံမှာ ခဏပျောက်ဆုံးသွားရပေါ့လေ။ သန်မာလှတဲ့ကြွက်သား အကြောတွေထောင်ရင်း တဆတ်ဆတ်တုန် ကာ ကျွန်တော့်ချယ်ရီပေါက်ထဲ ခပ်ပြင်းပြင်း ၀င်ကာ နှစ်ချက်သုံးချက် မုန်တိုင်းထန်သွားပြီးနောက် ရုတ်တရက် သူဆွဲထုတ်လိုက်ကာ ပက် လက်လန်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာပေါ် ဗိုက်သားတွေပေါ် ရေတံခွန်လို နို့ဖြူဖြူတွေ ဖြာကျပါတော့တယ်။ Yess!!ဒီနှစ်အတွင်းအ ကောင်းဆုံးသော climax ဖြစ်မှုပါ။ ရန်နိုင်ရဲ့ ငပဲဟာ ကျွန်တော့်တင်သားတွေထဲ dance ကသွားတယ် ပြီးတော့ မီးသတ်ပိုက်ခေါင်းလိုဖြာ ကျတာ အခုသူ့cum တွေနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုမျောစေပြီးနောက် ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်သို့ မောပန်းစွာခိုနားပါတော့တယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဖက်ကာ အတွေ့မှာအတန်ကြာနစ်မြောကြပြီး အံအားသင့်စရာ ရန်နိုင် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကို တပ်မက်စွာနမ်းပါတယ်။ အိုး.... အိပ်မက်တစ်ခု ရှင်သန်လာခြင်းပါပဲ။
လအနည်းငယ်အတွင်းမှာလည်း အကြိမ်အနည်းငယ်ထပ်ထပ်ပြီးဖြစ်ပျက်ကြပါသေးတယ်။ တစ်ကြိမ်ထက်တစ်ကြိမ် ပိုပြီးကောင်းလာပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အနေနှင့်ကတော့ အဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သော အတိတ်ကအချိန်ကို သိမ်းထားချင်ပါရော။ ရန်နိုင့်အတွက်တော့မသိဘူး။
အခုဖြစ်ပျက်နေခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာအတွေ့အကြုံတွေဟာ နှစ်များစွာကြာမည့် အခန်းဆက်အများကြီးရှိတဲ့ Story တစ်ပုဒ်ရဲ့အစဖြစ် ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သူ့အတွက် ကတော့...အပျော်ချိန်လေးသက်သက်တစ်ခုဖန်တီးမိခြင်းလား မသိပေမဲ့.... ရန်နိုင်ဟာ ကျွန်တော့်အတွက်....
Alex Aung (20.6.2010)
Posted by Alex Aung at 9:54 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 4:26 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 11:09 AM No comments: